Muhiim 2019: kubilaaw bandhigga Apple Arcade | Wararka IPhone
Toddobadii saacadood ayaa muxaadar dheer oo la sugayay ay bilaabatay shirkadda Apple. Tim Cook ayaa horay u sii fiirsaday oo Warkii ugu horreeyay wuxuu ahaa daahfurka rasmiga ah ee barnaamijka Apple Arcade
Waxaan horey u haysanay taariikh sii deyn. Bishii Sebtember 19, barnaamijka Apple Arcade ayaa si rasmi ah loo furay. Waxay kaliya sameeyeen demo seddex kulan ah, Frogger-ka caadiga ah ee nolosha oo dhan, laakiin markan rihii yar waxay leedahay muuqaallo muuqaal ah oo 3D ah. Waxay noo sheegeen in barxadani rabto inay yeelato ciyaaro da 'kasta leh, carruur iyo dad waaweynba. Waxay sidoo kale soo bandhigeen ciyaar dixirigoodu yahay geesinimada, ciyaarta markabka 2D ee caadiga ah, iyo Annapurna, oo ah riwaayad jaantus ah oo leh majaajilo
Waxay ku bilaabayaan madal ay ku jiraan buug ka badan boqol ciyaarood. Iyagu maahan oo kaliya ciyaaro ay abuurtay Apple. Waxay ku muujinayaan liis leh shirkado badan oo ciyaarta fiidiyowga ah oo alaabtooda ku soo rogay barxaddan.
Waxaad iska diiwaangelin kartaa khidmadda bil kasta ah $ 4,99, bisha ugu horreysa ee bilaash ah. Waxaan sii wadeynaa wargelinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Muhiimka ah 2019: ku bilaw bandhigga Apple Arcade